Daawo oo dhegayso Doodii Maanta ee Murashixiinta Golaha Deegaanka ee Bristol ay u qabatay BBC Somali |
Daawo oo dhegayso Doodii Maanta ee Murashixiinta Golaha Deegaanka ee Bristol ay u qabatay BBC Somali
Bristol (Gabiley.net) Waxa manta oo ay ololihii doorashada ee Waddanka Ingiriiksu ugu danbaysay oo barito loo dareerayo doorashooyinka Golaha Deegaanka iyo waliba tii Baarlamaanka ayaa BBC Somali ugu qabtay dood murashaxinta magaalada Bristol gabi ahaanba baahinteedii maanta sidii ay u dhammayd.
Wariyayaasha Daadihinayay Barnaamijkan maanta oo kala ahaa C/raxmaan Koronto iyo waliba Cabdi Bidhaan.
Magaalada Bristol oo ay ku noolyihiin Somali badan ayaa hadda marka loo eego inta kale ee wadanka Ingiriska ee ay Somalidu degan tahay ay aad u galeen siyaasadda iyaga oo ay ka qayb galeen dhammaan saddexda Xisbiga ee Wadanka ugu awooda badan.
Dhegayso Doodii oo dhammaystiran
Waxa hore Xisbiga Labour-ku u soo sharaxay doorashadii Golaha Deegaanka Gabadh hadda ah xildhibaanda lana yidhaahdo Hibaaq Jama.
Waxa kale oo ay hadda Somalidii iska soo sharaxeen labada Xisbi ee hadda dawladda Ingiriiska wadaaga ku ahaa oo kala ah Conservatives iyo waliba Liberal Democracy.
Doodan oo ay ka qayb galeen murashaxiinta Axmed Ducaale oo ka sharaxan Xisbiga Conservative-ka iyo Nura Aabe oo ka sharaxan Xisbiga Liberal Democracy iyo waliba Naasir Axmed Qaalib oo ah xubin firfircoon oo ka tirsan Xisbiga Labour-ka oo ay wakiilatay Margaret oo ah murashaxad Labour-ka ee magaladdan iyo waliba Cabdi Cumar Boobe oo ah aqoon yahan degan magaaladda Bristol.
Guud ahaan doodan oo aan hore loogu arag magaalada Bristol ayaa dadkii ka soo qayb galay su’aalo ku waydiiyeen murashaxiinta, waxaanay u rajeeyeen inay soo baxaan si codka Somalida xisbiga doonaan ha iska soo sharaxaane codkooda loo maqlo.
Guud ahaan Gabiley.net waxa ay u rajaynaysaa murashaxiinta rajo wanaagsan iyo waliba in dadkii isku diwaan geliyey Doorashadan ay codkooda siiyaan Murashixiintan.